Fanangonana J-n'ny Fahazazana - Wikipedia
Ny Fanangonana J-n'ny Fahazazana dia fitantarana apokrifa kristiana amin'ny fiteny latina ny amin'ny fahazazan'i Maria, ny fahaterahana sy ny fahazazan'i Jesosy. Atao hoe "fanangonana" izy io satria fanambarana lahatsoratra samihafa. Ny litera J dia avy amin'ny anaran'ny mpanonta io boky io tamin'ny voalohany, dia i Montagues Rhode James.
1 Tantaran'ilay fanangonana
2 Ny votoatin'ny lahatsoratra
2.1 Endrika Arundel
2.2 Endrika Hereford
Ny fanangonana J dia tsy misy intsony, nefa ny fikarohana amin'izao fotoana izao dia nahafahana nanakatra ny mety ho endrika nisehoan'ireo loharano nanovozan'ny mpanoratra azy, dia :
ny Evanjelin'i Pseodo-Matio,
ny fanangonana iray tranainy kokoa, atao hoe fanangonana I, izay avy amin'ny soratra apokrifa irlandey, dia ny Bokin'i Flavus Fergusiorum sy ny Fitantarana ny fahazazana an'i Leabhar Breac. Ity fanangonana ity dia nanovo tamin'ny loharano roa, dia ny Protevanjelin'i Jakoba sy loharano iray manokana izay mety ho ny Liber de natiuitate saluatoris et de Maria uel obstetrice apocryphus izay resahina ao amin'ny Didin'i Gelasio.
Misy endrika roa ny fanangonana J, dia ny "endrika Arundel", izay nampiditra singa avy tamin'ny soratr'i Pseodo-Matio, sy ny "endrika Hereford", izay ahitana ny Libellus de Nativitate Mariae sy ny Toritenin'i Pseodo-Aogostiniana - Tovana 195.
Ny niandohan'ny fanangonana J dia mety tany amin'ny taona 800 izay nanoratana azy taloha indrindra. Io fanangona io dia niankina amin'ny soratr'i Pseodo-Matio, ka tsy mihoatra ny tenantenan'ny taonjato faha-6 (izay fotoana aloha indrindra heverina fa nisian'i Pseodo-Matio). Ny fotoana nisarahan'ireo endrika roa ireo dia tsy fantatra.
Ny votoatin'ny lahatsoratraHanova
Ny sora-tananan'ny endrika Arundel dia nanomboka fantatra tamin'ny taona 800. Azo fintinina toy izao ny votoatiny:
Teny mialoha maneho ny lahatsoratra ho nosoratan'i Matio. Ny fandikan-teny dia valaza fa nataon'i Hieronimo avy any Stridona (na Jerôma). Io teny mialoha io dia miseho ho toy ny taratasin'i Hieronimo alefa amin'i Kromatio avy any Akoilea sy amin'i Heliodoto avy any Altino.
Fahaterahana sy fahazazan'i Maria ao amin'ny Tempoly. Fanambadian'i Maria sy Josefa, fanambaràna mialoha ny hahaterahan'i Jesosy, famangiana sy fanaovana "fitsaran'Andriamanira" an'i Maria sy Josefa.
Fivahiniana tao Betlehema hanatanteraka ny fanisam-bahoaka.
Fandosiran'i Joany Batista sy Elizabeta, famonoana an'i Zakaria. Andalana voaray koa ao amin'ny Protevanjelin'i Jakoba.
Fahagagana nataon'i Joany Batista tao an-tany efitra.
Fandosiran'i Jesosy sy ny ray aman-dreniny tany Egipta. Andalana voaray koa amin'ny ampahany ao amin'ny Evanjelin'i Pseodo-Matio.
Fitantarana ny fiverenana avy any Egipta.
Fahagagana nataon'i Jesosy fony izy mbola zaza.
Ny endrika Hereford dia tsy ahitana na ny teny mialoha, na ny fiainan'i Joany Batista, na ireo fitantarana manaraka ny fandosirana tany Egipta. Ankoatr'izany, ireto fitantarana manaraka ireto dia misy tsy fitoviany amin'ny endrika Arundel:
Fitantarana ny nahitan'i Josefa ny fitondran'i Maria vohoka: ny endrika Hereford dia mandray amin'ny ampahany ny toriteny pseodo-aogostiniana.
Fitantarana ny fandosirana tany Egipta (izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny endrika sasany amin'ny endrika Hereford).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanangonana_J-n%27ny_Fahazazana&oldid=977767"
Dernière modification le 27 Novambra 2019, à 13:26
Voaova farany tamin'ny 27 Novambra 2019 amin'ny 13:26 ity pejy ity.